TurnKey Linux: Virtual Ngwaọrụ Ọbá akwụkwọ | Site na Linux
N'oge ebe izi ezi y docker na-abụ ezigbo ọrụ, ọ dị mkpa icheta ịdị adị nke oru ngo nwere ogologo akụkọ ihe mere eme akpọrọ Linux TurnKey, nke na-ekesa free mebere ngwaọrụ nke na-ekwe ka mmejuputa (ntụgharị) nke nyiwe teknụzụ na igwe arụmọrụ, igwe ojii ma ọ bụ LiveCD, na nkeji ole na ole.
1 Gịnị bụ a mebere ngwaọrụ?
2 Gịnị bụ TurnKey Linux?
3 TurnKey Linux Atụmatụ
4 Kedu ka TurnKey Linux si arụ ọrụ?
5 Mkpebi na TurnKey Linux
Gịnị bụ a mebere ngwaọrụ?
Un mebere ngwaọrụ ọ bụ ngwaọrụ tupu ikekọta, nọọrọ onwe ha sistemụ, nke a wuru site na ijikọta ngwa (dịka WordPress) yana sistemụ arụmọrụ arụ ọrụ iji rụọ ọrụ nke ọma na ngwaike ngwaike nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ igwe arụmọrụ (dịka VMWare, VirtualBox, Xen HVM, KVM, EC2).
Gịnị bụ TurnKey Linux?
Ọ bụ ama ama n'ọbá akwụkwọ dabeere na Debian, nke otu kachasị ihe onyonyo site na ngwa oghe emeghe na-abịa tupu arụnyere ma hazie ka etinye ya na nkeji nkeji, ya bụ, ekele Turnkey anyị pụrụ ịnụ ụtọ dị iche iche ngwa na-enweghị na-aga site na mgbagwoju usoro nke echichi, oke na nhazi.
Ngwaọrụ a na - enye anyị ohere ịchekwa oge na ego, ọ na - enye anyị nhazi yana nkwado dị ukwuu, ọ dịkwa mma ma dịkwa mfe ijikwa.
Linux TurnKey ọ na-akpaghị aka na-emelite kwa ụbọchị na nche patches na ya wuru kpamkpam na-emeghe isi, ya mere anyị nwere 100% uzo usoro, free nke azụ ụzọ, ekwe ekwe ma ọ bụ na nzuzo-agaghị emeli. Nke ahụ pụtara na ọ nweghị ịdabere na onye na-eweta ọrụ.
Featureskpụrụ njirimara gụnyere ndabere / Weghachi na Mbugharị ngwá ọrụ, ogwe njikwa weebụ, na nlekota nwụnye na nzi ozi email nke nhọrọ.
TurnKey Linux Atụmatụ
Ọ na - enye gị ohere itinye ihe karịrị 100 ngwa efu na igwe ojii Amazon EC2, igwe arụmọrụ ma ọ bụ dị ka LiveCD, n'ihe gbasara nkeji.
Easy, akpaka backups na nnọọ ngwa ngwa mweghachi.
Ngwa etinyere na ìhè, obere, ngwa ngwa na mfe iji.
Ọ dị mma ma dịkwa mfe iji dozie, yana mmelite kwa ụbọchị nke gụnyere ihe nchedo ọhụụ.
Wuru ma nwalee ya site na ndi obodo.
Sistemụ nlekota na alerts gụnyere.
Akpaka mwekota na Amazon EC2.
Dabere na Debian 8 ("Jessie") - Na akpaka nche mmelite karịrị 37.500 nchịkọta.
O nwere ọtụtụ akwụkwọ anyị nwere ike ịnweta Ebe a.
Kedu ka TurnKey Linux si arụ ọrụ?
Zọ kachasị mfe iji TurnKey Linux bụ site na nbudata onyonyo nke ngwa anyị chọrọ itinye. Iji mee nke a, anyị ga-abanye weebụsaịtị gọọmentị https://www.turnkeylinux.org ma budata onyonyo ahụ n'ụdị anyị chọrọ.
Na ụdị nke ugbu a Linux TurnKey 14.1 Enwere ọtụtụ ngwa, iji kọwaa otu o si arụ ọrụ, ebudatara m ngwaọrụ ahụ mebere Odoo. Nwere ike ịhụ na njide, ụdị dakọtara dị iche iche, na mgbakwunye data data ndabara.
Ozugbo ebudatara .ova, nke na nke a bụ 724mb, anyị na-aga n'ihu na-agba ọsọ na Virtualbox, anyị na-enwe obi ụtọ ozugbo na a na-emezi ihe niile ka anyị wee nwee ike ịbubata ndabara ndabara.
Mgbe ahụ, dị ka usoro ihe omume ahụ si chọọ, ọ ga-arịọ ụfọdụ data, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ o metụtara okwuntughe iji nweta ọrụ ndị dị mkpa.
Mgbe ahụ data ga-egosi na-enwe ike jikọọ na ngwa, nke ị nwere ike ịnweta na-enweghị nsogbu ọ bụla site na isi iyi gị na kọmputa.
N'otu ụzọ ahụ, site na ịnweta url ọ bụla ị ga-enwe ike ịnweta shei Web na ịnweta mgbọrọgwụ, Webmin iji jikwaa mmejuputa ya, Onye nchịkwa nke bụ njikwa nchekwa data, na mgbakwunye inwe ike ijikọ site na SSH / SFTP.
Linux Odoo Turnkey
Nchịkwa Turnkey Linux
Shell Turnkey Linux webụ
Mkpebi na TurnKey Linux
Na mmechi, Turnkey Linux bụ ngwa ọrụ na-ejikọ iji jikọta ịdị ọkụ, ọsọ, ịdị mfe nke iji, nchekwa na ịdị mfe na obere oghere. Ngwaọrụ ndị mebere gburugburu ọrụ a dị mma, ha na-enye onye ọ bụla ohere iji ngwaọrụ nke ha nwere ike ọ gaghị eji n'ihi etu nhazi na ntinye ha siri dị.
Bụ ihe ọhụụ zuru oke na-enye ohere iji ya bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi nke ukwuu, ya mere, ana m akwado ngwá ọrụ a iji nwalee ngwa na obere oge, na itinye ngwa na gburugburu mmepụta yana ụkpụrụ dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » TurnKey Linux: Virtual Ngwaọrụ Ọbá akwụkwọ
Lee ezigbo isiokwu!
Enwere m iji gosi na ndị na-eme docker, zoo xD
Tuxeando Ubuntu na tux4ubuntu
CentOS 7 Hypervisor II na nke ikpeazụ - SMB Netwọk